ကားရှိသူ ကားမောင်းသူတိုင်းအတွက် တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ လက်ဆောင်…. ရုတ်တရက် စက် နှိုးမရတဲ့ ပြဿနာနှင့် ချွတ်ယွင်းချက်များကို ကိုယ်တိုင် စစ်ကြည့်နည်း - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > နည်းလမ်းများ > ကားရှိသူ ကားမောင်းသူတိုင်းအတွက် တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ လက်ဆောင်…. ရုတ်တရက် စက် နှိုးမရတဲ့ ပြဿနာနှင့် ချွတ်ယွင်းချက်များကို ကိုယ်တိုင် စစ်ကြည့်နည်း
ကားရှိသူ ကားမောင်းသူတိုင်းအတွက် တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ လက်ဆောင်…. ရုတ်တရက် စက် နှိုးမရတဲ့ ပြဿနာနှင့် ချွတ်ယွင်းချက်များကို ကိုယ်တိုင် စစ်ကြည့်နည်း
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 5:31 AM နည်းလမ်းများ
[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် လူတိုင်းကြုံဖူးသော ရုတ်တရက်ကားအင်ဂျင်စက် နှိုးမရသော ပြဿနာနှင့် ချွတ်ယွင်းအားနည်းချက်များကို ကိုယ်တိုင်အဖြေရှာနည်း ရှယ်ပြီသိမ်းထားပါရုတ်တရက်ကားအင်ဂျင်စက် နှိုးမရသော အခက်အခဲမျိုးကို ကား ပိုင်ရှင်တိုင်း ကြုံဖူးကြသည်။ ကား အကြောင်း အခြေခံကျကျနားလည် ထားသော ၀ါရင့်အတွေ့အကြုံရှိသူ များအတွက် ဖြေရှင်းနိုင်သော်လည်း လူငယ်များနှင့် ယာဉ်ပိုင်ရှင်အသစ် များအတွက် ကားစက်နှိုးမရသော ပြဿနာသည် ခေါင်းခဲအကြပ်ရိုက် ဖြစ်စေသော အခက်အခဲတစ်မျိုးဖြစ် ပါသည်။
သင့်ကားအင်ဂျင် စက်နှိုးသွား စေရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်စဉ် မည် သည့်အရာများ ဖြစ်ပေါ်လာပါသ နည်း။ ချွတ်ယွင်းမှုဖြစ်ပြီး မူမမှန်သော အခြေအနေများကို လေ့လာသုံးသပ် ၍ #ကားစက်နှိုးမရသော ပြဿနာများ ၏ အဖြေကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ပါ သည်။
(၁) Ignition Switch သော့ ပေါက်ထဲသို့ ကားသော့ထည့်ပြီးလှည့် ၍ ရပါသလား။
(၂) ကားသော့လှည့်လိုက်သော အခါ ကားဒတ်ခ်ျဘုတ်တွင် မီးလင်း လာပါသလား။ ကားလုံခြုံရေးစနစ် အရ ကားသော့ပုံစံ (Key-shaped Light) မီးအလင်းရောင် ပေါ်လာပါ သလား။ အင်ဂျင် Check မီးလင်း နေပါသလား။
(၃) ကားသော့တံကို “On” အဆင့်မှ “Start” အနေအထား Position သို့လှည့်လိုက်သောအခါ ဖြစ်ပေါ် သော အခြေအနေများ –
အင်ဂျင်လှည့်မရပါ။ မည် သည့် အသံမျှလည်း မကြားပါ။
ကားသော့ လှည့်လိုက်ပါက တောက်၊ တောက်ဟု မြည်သံကြားရ ပြီး အင်ဂျင်မလည်ပါ။ စက်နိူးမော် တာ မရုန်းပါ။
စက်နှိုးမော်တာ ဖြည်းဖြည်း သာ လည်သည်။ စက်မနှိုးပါ။
စက်နှိုးမော်တာတစ်ပတ်ချင်း အားမရှိသော ပုံစံမျိုးဖြင့် လည်ရုံသာ လည်ပါသည်။ စက်မနိုးပါ။
ကားစက်နှိုးမရပါက ပထမဆုံး စစ်ဆေးရမည့်အခြေခံများမှာ
ဘက်ထရီအားရှိပါသလား။ OK မှာ ရှိနေပါသလား။
အော်တိုဂီယာဘောက်စ်ကား များ ဂီယာတံကို Park (P) တွင်ထား ပါက စက်နှိုးမော်တာ မလည်နိုင်အောင် စီမံထားပါသည်။ Starting System တွင် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိစေရန် Neut-ral Safety Switch တပ်ဆင်ထားပါ သည်။ ပါကင် (P) နေရာတွင် ဂီယာ ၀င်နေပြီး ကားစက်နိုးသွားပါက ယာဉ် တိုက်မှု ဖြစ်တတ်ပါသည်။
ဘက်ထရီ ကေဘယ်ကြိုး အဆက်များ၊ ဘက်ထရီခေါင်းငုတ် များ ချောင်နေသလား။ လွတ်နေ သလား။
ဆီတိုင်ကီထဲတွင် လောင်စာ ဆီ အလုံအလောက် ရှိပါသလား။
အမြင့်ကားများတွင် လုံခြုံမှု စနစ်ကို အဆင့်မြှင့်ထား၍ကားသော့ပုံ မီးလင်းနေပါက စက်နှိုးမရပါ။
ကားသူခိုးရန်မှ လုံခြုံမှုရှိစေ ရန် Anti-theft System တပ်ထား သော ကားများတွင် အလွယ်တကူ စက်နှိုး၍ မရနိုင်ပါ။
ချာဂျင်မ၀င်နိုင်ဘဲ အားကုန် နေသော ဘက်ထရီကြောင့် စက်နှိုး မော်တာ လုံးဝ မလှုပ်ရှားနိုင်တော့ပါ။ ဘက်ထရီတွင် အားလက်ကျန်ရှိ ^မရှိ စစ်ဆေးပါ။ ဟွန်းတီးကြည့်ပါ။ ၀ိုက် ဘာဖွင့်ကြည့်ပြီး ရှေ့မီးကြီးဖွင့်ကြည့် ပါ။ ဟွန်းသံကျယ်ပြီး ၀ိုင်ဘာလည် ပတ်မှုကောင်းပါက ဘက်ထရီကောင်း ပါသည်။ မီးကြီးအလင်းရောင်လည်း စူးရှပြီး လင်းထိန်နေပါက ဘက်ထရီ အားပြည့်နေသော အခြေအနေဖြစ်ပါ သည်။
ဒိုင်နမို ချာဂျင်စနစ် အားနည်း ၍ ဘက်ထရီသို့ ချာဂျင်အ၀င်နည်းပါ က ဘက်ထရီတွင် အားမရှိနိုင်ပါ။ နွေရာသီတွင် အပူချိန်မြင့်မားလွန်း၍ ဘက်ထရီအိုးထဲမှ လျှပ်လိုက်ရည်များ အငွေ့ပျံခန်းခြောက်မှု မြန်သည်။ ဘက်ထရီပလိပ်ပြားပေါ်အောင်အထိ လျှပ်လိုက်ရည် လျော့ကျခန်းခြောက် နေပါက ဘက်ထရီဓာတ်ပြုနိုင်သော မျက်နှာပြင်ဧရိယာ ကျဆင်းသွား၍ ဘက်ထရီအားမရှိသော ပုံစံမျိုးဖြစ်နေ တတ်သည်။
ဘက်ထရီအိုးတွင် လျှပ်လိုက် ရည် Level ပြန်ပြည့်အောင် ဘက်ထရီ မိုးရေထပ်ဖြည့်ပေးရသည်။ ဘက်ထရီ ငုတ်တိုင်နှင့် ဘက်ထရီခေါင်း တပ် ဆင်ထားရှိမှု တင်းကြပ်သေချာနေရ မည်။ ဘက်ထရီခေါင်း ချောင်နေပါက ထိဆက်မှု အားနည်းပြီး စက်နှိုး မော်တာဆွဲပါက အားမကောင်းဘဲ ဖြစ်နေတတ်သည်။ ဘက်ထရီတစ်လုံး ၏ သက်တမ်းသည် နှစ်နှစ်မှ လေး နှစ်အထိ အသုံးခံပါသည်။ မကြာခဏ ကားအင်ဂျင် စက်နှိုးပေးရသော ကားများ၊ အဲကွန်းအမြဲသုံးသောကား များ ဘက်ထရီသက်တမ်းတိုပါသည်။
သော့အုံ (Ignition Switch) ထဲတွင်ကားသော့လှည့်မရခြင်း
စတီယာရင်တွင် Lock ကျနေ ပါက ကားသော့လှည့်၍မရပါ။ ရှေ့ ဘီးမောင်းကားများ ရှေ့ဘီးတာယာနှင့် လမ်းပလပ်ဖောင်း ထိတိုက်နေပါက Steering Wheel လှည့်၍ မရပါ။ ကားစတီယာရင်ကွင်းကို ဘယ် / ညာ ကစားပေးပြီး ကားသော့ကို ကစားပေး ပါက စတီယာရင်ကွင်း Lock ကျနေ သည်ကို ပြန်၍ ကုစားနိုင်ပါမည်။
ကားဒတ်ခ်ျဘုတ် Instrument Panel တွင် မီးအလင်းရောင်မပေါ် ခြင်း
ကားသော့တံသွင်း၍သော့အုံကို On အနေအထားဖွင့်လိုက်ပါက ဒတ်ခ်ျဘုတ်မီးများ လင်းရပါသည်။ အကယ်၍ Instrument Panel တွင် မီးအလင်းရောင်များပေါ်မလာပါက ဘက်ထရီ လုံးဝအားမရှိ၍ဖြစ်ပါလိမ့် မည်။
စက်နှိုး မော်တာ လုံးဝမလည် နိုင်ခြင်း
ကားသော့ လှည့်လိုက်သော် လည်း မော်တာ လုံးဝ မဆွဲပါ။ ဘက်ထရီအားရှိ / မရှိဦးစွာစစ်ဆေးပါ။ ဘက်ထရီအား ကောင်းပါလျက် မော်တာ လုံးဝမလှုပ်ခြင်းမှာ မော်တာ စနစ်တွင် ချွတ်ယွင်းချက်များ ရှိနေ၍ ဖြစ်ပါမည်။
ကားသော့အုံ (Ignition Switch) ကောင်း / မကောင်း စစ်ဆေး ပါ။ ကားသော့အုံ Switch မှ လှမ်းပို့ လိုက်သော လျှပ်စစ်ပါဝါသည် မော်တာ Solenoid ကွိုင်ဝါယာသို့ ရောက်ရပါသည်။
Solenoid ယူနစ်ကစားမှ မော်တာသို့ အားကောင်းသော လျှပ်စီး ကြောင်း အမ်ပီယာများများကို ဘက် ထရီမှ ရရှိပါမည်။
စက်နှိုးမော်တာ စနစ်တွင် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိစေရန် Nautral Safety Switch ထားလေ့ရှိပါသည်။ ၎င်း Switch မကောင်းပါကလည်း စက် နှိုးမော်တာစနစ်သို့ ဘက်ထရီမှ စွမ်း အင်များ မရောက်နိုင်ပါ။
မော်တာမှ တောက်ခနဲမြည်သံ ထွက်ပြီး အင်ဂျင်ကိုမလှည့်နိုင်ခြင်း
ကားသော့လှည့်၍ စက်နှိုး မော်တာကို ဆွဲခိုင်းသည်။ မော်တာမှ ဆိုလိုနွိုက်ကစားသော တောက် ခနဲ မြည်သံထွက်သည်။ သို့သော်လည်း အင်ဂျင်ကို မလှည့်နိုင်ဘဲ ရပ်နေမည်။ ဤသို့ဖြစ်ပါက ဘက်ထရီအားနည်း နေ၍ဖြစ်မည်။ (သို့မဟုတ်) ဘက်ထရီ ကြိုးနှင့် ဘက်ထရီခေါင်းများ ဆက် သွယ်မှု မကောင်းဘဲ မထိတထိဖြစ်နေ ခြင်းကြောင့်ဖြစ်မည်။
စက်နှိုးမော်တာ လည်သော် လည်း ဆွဲအားမကောင်းဘဲ နှေးကွေး နေသည်။ ကားအင်ဂျင်စက်လည်း မနှိုးနိုင်ဖြစ်နေပါက ကားဘက်ထရီ အားအပြည့်ရှိ / မရှိ ပထမစစ်ဆေးပါ။ ဘက်ထရီ အားကောင်းပါလျက် မော်တာရုန်းအား မကောင်းခြင်းဖြစ် နေပါက စက်နှိုးမော်တာ (Starter Motor) မကောင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင် သည်။ ဒိုင်နမို / မော်တာ ဆားဗစ်ဆိုင် တွင် မော်တာကို စစ်ဆေးပါ။ ဆားဗစ် စင်လုပ်ပါ။ မကောင်းသော အစိတ် အပိုင်းများကို အစားထိုးလဲပါ။
စက်နှိုးမော်တာစနစ် လည်း ကောင်းသည်၊ ဘက်ထရီလည်း အား အပြည့်ရှိသည်။ ကားသော့လှည့်၍ စက်နှိုးကြည့်ပါက မော်တာအား ကောင်းကောင်းနှင့် လှည့်ပေးနိုင် သည်။ သို့သော် ကားအင်ဂျင်စက်နှိုး ရန် အရိပ်အယောင်တောင် မမြင်ဖြစ် နေတတ်သည်။ ကားအင်ဂျင်တစ်လုံး စတင်စက်နှိုးသွားနိုင်ရန် လိုအပ်ချက် များက အဘယ်နည်း။
(က) အင်ဂျင် လုံရမည်။
Compression ဖိသိပ်အား မြင့်မားရ မည်။ အင်ဂျင် ဆလင်ဒါ တစ်လုံးတွင် Compression Test စမ်းကြည့်ပါက ဖိသိပ်အား 120 psi မှ 170 psi အတွင်းရှိရမည်။ အကယ်၍ ဖိအား 70-80 psi ထက် လျော့နည်းနေလျှင် အင်ဂျင်စက်နှိုးရန် မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။ အင်ဂျင် Compression ကောင်းပြီး လုံနေစေရန် ပစ္စတင် Ring များ ကောင်းရမည်။ ဆလင်ဒါ Head ဂတ်စ် ကတ်လုံရမည်။ ဗားများ လုံရမည်။ အင်ဂျင် Ring ကွင်းများကျိုးပြီး တိုင်မင် Belt ကြိုး မကောင်း၍ တိုင်မင်လွဲချော် နေသော အင်ဂျင်တစ်လုံးသည် Compression ဖိသိပ်အား မကောင်းနိုင် ပါ။
(ခ) တိုင်မင် မှန်ကန်ရမည်။
အင်ဂျင် Head အတွင်းမှ ဗားများ အဖွင့်အပိတ် တိုင်မင်ကို မှန်ကန်တိကျ စွာ လှုပ်ရှားစေသောအရာမှာ Camshaft ဖြစ်သည်။ Camshaft ကို ချိန်းကြိုး (သို့မဟုတ်) တိုင်မင် Belt ကြိုးဖြင့် လှည့်ပေးသည်။ တိုင်မင် Belt ကြိုးသက်တမ်းပြည့်ပါက အချိန် မီ အသစ်လဲပေးရသည်။
(ဂ) လောင်စာဆီနှင့် မီးပွား Spark
ဓာတ်ဆီ အင်ဂျင်များသည် မီး တိုင်မင်မှန်ကန်မှသာ စက်နှိုးရန်လွယ် ကူသည်။ မီးပေးတိုင်မင်စနစ် ကောင်း ရန် Ignition Coil နှင့် Spark Plug များလည်း ကောင်းရသည်။ ပလပ်ကြိုး နှင့် ဒစ်စတြီဗျူတာများ ကောင်းရ သည်။ ဒစ်စတြီဗျူတာစနစ်ကို ကျော် လွန်ခဲ့သော ယနေ့ခေတ်ကားအင်ဂျင် များတွင် မီးတိုင်မင်ကို ကွန်ပျူတာ စနစ်က အမိန့်ပေးညွှန်ကြားသည်။
ထိုနည်းအတူ လောင်စာဆီ ပို့ စနစ်တွင်လည်း ကွန်ပျူတာထိန်း ကျောင်းမှုရှိသော EFI စနစ်ဖြင့် ဆီဖြန့်ဝေပေးသည်။ လောင်စာဆီ များ အရည်အသွေးမှန်ကန်ပြီး Injector များ ကောင်းပါက စက်နှိုးရန်အဆင် သင့်ဖြစ်သော အင်ဂျင်တစ်လုံးဖြစ်ပါ သည်။
ကားအင်ဂျင် တစ်လုံး စက်နှိုး၍ မရသောအကြောင်းတရားများကို ရှာ ဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် သာမန်မျက်မြင် စစ်ဆေးရုံဖြင့်မသိနိုင်သော ပြဿနာ များကို ပစ္စည်းကိရိယာ Device အထောက်အကူများဖြင့် ရှာဖွေမှသာ မြင်နိုင်ပါသည်။ ကားစက်နှိုးရခက် သော၊ အနှိုးထိုင်းသော၊ စက်သံမမှန် သောကားများကို ပစ္စည်းကိရိယာစုံ လင်သော စက်ပြင်ကားဝပ်ရှော့ပ်ကြီး များတွင် စစ်ဆေးပြုပြင်သင့်ပါသည်။
ကားချစ်သူ Credit awjmyanmar
ကားရှိသူ ကားမောငျးသူတိုငျးအတှကျ တနျဖိုးရှိလှတဲ့ လကျဆောငျ…. ရုတျတရကျ စကျ နှိုးမရတဲ့ ပွဿနာနှငျ့ ခြှတျယှငျးခကျြမြားကို ကိုယျတိုငျ စဈကွညျ့နညျး
[Unicode]ဖတျရနျ လူတိုငျးကွုံဖူးသော ရုတျတရကျကားအငျဂငျြစကျ နှိုးမရသော ပွဿနာနှငျ့ ခြှတျယှငျးအားနညျးခကျြမြားကို ကိုယျတိုငျအဖွရှောနညျး ရှယျပွီသိမျးထားပါ
ရုတျတရကျကားအငျဂငျြစကျ နှိုးမရသော အခကျအခဲမြိုးကို ကား ပိုငျရှငျတိုငျး ကွုံဖူးကွသညျ။ ကား အကွောငျး အခွခေံကကြနြားလညျ ထားသော ၀ါရငျ့အတှအေ့ကွုံရှိသူ မြားအတှကျ ဖွရှေငျးနိုငျသျောလညျး လူငယျမြားနှငျ့ ယာဉျပိုငျရှငျအသဈ မြားအတှကျ ကားစကျနှိုးမရသော ပွဿနာသညျ ခေါငျးခဲအကွပျရိုကျ ဖွဈစသေော အခကျအခဲတဈမြိုးဖွဈ ပါသညျ။
သငျ့ကားအငျဂငျြ စကျနှိုးသှား စရေနျ ကွိုးပမျးဆောငျရှကျစဉျ မညျ သညျ့အရာမြား ဖွဈပျေါလာပါသ နညျး။ ခြှတျယှငျးမှုဖွဈပွီး မူမမှနျသော အခွအေနမြေားကို လလေ့ာသုံးသပျ ၍ #ကားစကျနှိုးမရသော ပွဿနာမြား ၏ အဖွကေို ရှာဖှဖေျောထုတျနိုငျပါ သညျ။
(၂) ကားသော့လှညျ့လိုကျသော အခါ ကားဒတျချြဘုတျတှငျ မီးလငျး လာပါသလား။ ကားလုံခွုံရေးစနဈ အရ ကားသော့ပုံစံ (Key-shaped Light) မီးအလငျးရောငျ ပျေါလာပါ သလား။ အငျဂငျြ Check မီးလငျး နပေါသလား။
အငျဂငျြလှညျ့မရပါ။ မညျ သညျ့ အသံမြှလညျး မကွားပါ။
ကားသော့ လှညျ့လိုကျပါက တောကျ၊ တောကျဟု မွညျသံကွားရ ပွီး အငျဂငျြမလညျပါ။ စကျနိူးမျော တာ မရုနျးပါ။
စကျနှိုးမျောတာ ဖွညျးဖွညျး သာ လညျသညျ။ စကျမနှိုးပါ။
စကျနှိုးမျောတာတဈပတျခငျြး အားမရှိသော ပုံစံမြိုးဖွငျ့ လညျရုံသာ လညျပါသညျ။ စကျမနိုးပါ။
ကားစကျနှိုးမရပါက ပထမဆုံး စဈဆေးရမညျ့အခွခေံမြားမှာ
ဘကျထရီအားရှိပါသလား။ OK မှာ ရှိနပေါသလား။
အျောတိုဂီယာဘောကျဈကား မြား ဂီယာတံကို Park (P) တှငျထား ပါက စကျနှိုးမျောတာ မလညျနိုငျအောငျ စီမံထားပါသညျ။ Starting System တှငျ ဘေးကငျးလုံခွုံမှုရှိစရေနျ Neut-ral Safety Switch တပျဆငျထားပါ သညျ။ ပါကငျ (P) နရောတှငျ ဂီယာ ၀ငျနပွေီး ကားစကျနိုးသှားပါက ယာဉျ တိုကျမှု ဖွဈတတျပါသညျ။
ဘကျထရီ ကဘေယျကွိုး အဆကျမြား၊ ဘကျထရီခေါငျးငုတျ မြား ခြောငျနသေလား။ လှတျနေ သလား။
ဆီတိုငျကီထဲတှငျ လောငျစာ ဆီ အလုံအလောကျ ရှိပါသလား။
အမွငျ့ကားမြားတှငျ လုံခွုံမှု စနဈကို အဆငျ့မွှငျ့ထား၍ကားသော့ပုံ မီးလငျးနပေါက စကျနှိုးမရပါ။
ကားသူခိုးရနျမှ လုံခွုံမှုရှိစေ ရနျ Anti-theft System တပျထား သော ကားမြားတှငျ အလှယျတကူ စကျနှိုး၍ မရနိုငျပါ။
ခြာဂငျြမဝငျနိုငျဘဲ အားကုနျ နသေော ဘကျထရီကွောငျ့ စကျနှိုး မျောတာ လုံးဝ မလှုပျရှားနိုငျတော့ပါ။ ဘကျထရီတှငျ အားလကျကနျြရှိ ^မရှိ စဈဆေးပါ။ ဟှနျးတီးကွညျ့ပါ။ ၀ိုကျ ဘာဖှငျ့ကွညျ့ပွီး ရှမေီ့းကွီးဖှငျ့ကွညျ့ ပါ။ ဟှနျးသံကယျြပွီး ၀ိုငျဘာလညျ ပတျမှုကောငျးပါက ဘကျထရီကောငျး ပါသညျ။ မီးကွီးအလငျးရောငျလညျး စူးရှပွီး လငျးထိနျနပေါက ဘကျထရီ အားပွညျ့နသေော အခွအေနဖွေဈပါ သညျ။
ဒိုငျနမို ခြာဂငျြစနဈ အားနညျး ၍ ဘကျထရီသို့ ခြာဂငျြအဝငျနညျးပါ က ဘကျထရီတှငျ အားမရှိနိုငျပါ။ နှရောသီတှငျ အပူခြိနျမွငျ့မားလှနျး၍ ဘကျထရီအိုးထဲမှ လြှပျလိုကျရညျမြား အငှပြေံ့ခနျးခွောကျမှု မွနျသညျ။ ဘကျထရီပလိပျပွားပျေါအောငျအထိ လြှပျလိုကျရညျ လြော့ကခြနျးခွောကျ နပေါက ဘကျထရီဓာတျပွုနိုငျသော မကျြနှာပွငျဧရိယာ ကဆြငျးသှား၍ ဘကျထရီအားမရှိသော ပုံစံမြိုးဖွဈနေ တတျသညျ။
ဘကျထရီအိုးတှငျ လြှပျလိုကျ ရညျ Level ပွနျပွညျ့အောငျ ဘကျထရီ မိုးရထေပျဖွညျ့ပေးရသညျ။ ဘကျထရီ ငုတျတိုငျနှငျ့ ဘကျထရီခေါငျး တပျ ဆငျထားရှိမှု တငျးကွပျသခြောနရေ မညျ။ ဘကျထရီခေါငျး ခြောငျနပေါက ထိဆကျမှု အားနညျးပွီး စကျနှိုး မျောတာဆှဲပါက အားမကောငျးဘဲ ဖွဈနတေတျသညျ။ ဘကျထရီတဈလုံး ၏ သကျတမျးသညျ နှဈနှဈမှ လေး နှဈအထိ အသုံးခံပါသညျ။ မကွာခဏ ကားအငျဂငျြ စကျနှိုးပေးရသော ကားမြား၊ အဲကှနျးအမွဲသုံးသောကား မြား ဘကျထရီသကျတမျးတိုပါသညျ။
သော့အုံ (Ignition Switch) ထဲတှငျကားသော့လှညျ့မရခွငျး
စတီယာရငျတှငျ Lock ကနြေ ပါက ကားသော့လှညျ့၍မရပါ။ ရှေ့ ဘီးမောငျးကားမြား ရှဘေီ့းတာယာနှငျ့ လမျးပလပျဖောငျး ထိတိုကျနပေါက Steering Wheel လှညျ့၍ မရပါ။ ကားစတီယာရငျကှငျးကို ဘယျ / ညာ ကစားပေးပွီး ကားသော့ကို ကစားပေး ပါက စတီယာရငျကှငျး Lock ကနြေ သညျကို ပွနျ၍ ကုစားနိုငျပါမညျ။
ကားဒတျချြဘုတျ Instrument Panel တှငျ မီးအလငျးရောငျမပျေါ ခွငျး
ကားသော့တံသှငျး၍သော့အုံကို On အနအေထားဖှငျ့လိုကျပါက ဒတျချြဘုတျမီးမြား လငျးရပါသညျ။ အကယျ၍ Instrument Panel တှငျ မီးအလငျးရောငျမြားပျေါမလာပါက ဘကျထရီ လုံးဝအားမရှိ၍ဖွဈပါလိမျ့ မညျ။
စကျနှိုးမျောတာ လုံးဝမလညျ နိုငျခွငျး
ကားသော့ လှညျ့လိုကျသျော လညျး မျောတာ လုံးဝ မဆှဲပါ။ ဘကျထရီအားရှိ / မရှိဦးစှာစဈဆေးပါ။ ဘကျထရီအား ကောငျးပါလကျြ မျောတာ လုံးဝမလှုပျခွငျးမှာ မျောတာ စနဈတှငျ ခြှတျယှငျးခကျြမြား ရှိနေ၍ ဖွဈပါမညျ။
ကားသော့အုံ (Ignition Switch) ကောငျး / မကောငျး စဈဆေး ပါ။ ကားသော့အုံ Switch မှ လှမျးပို့ လိုကျသော လြှပျစဈပါဝါသညျ မျောတာ Solenoid ကှိုငျဝါယာသို့ ရောကျရပါသညျ။
Solenoid ယူနဈကစားမှ မျောတာသို့ အားကောငျးသော လြှပျစီး ကွောငျး အမျပီယာမြားမြားကို ဘကျ ထရီမှ ရရှိပါမညျ။
စကျနှိုးမျောတာ စနဈတှငျ ဘေးကငျးလုံခွုံမှုရှိစရေနျ Nautral Safety Switch ထားလရှေိ့ပါသညျ။ ၎င်းငျး Switch မကောငျးပါကလညျး စကျ နှိုးမျောတာစနဈသို့ ဘကျထရီမှ စှမျး အငျမြား မရောကျနိုငျပါ။
မျောတာမှ တောကျခနဲမွညျသံ ထှကျပွီး အငျဂငျြကိုမလှညျ့နိုငျခွငျး
ကားသော့လှညျ့၍ စကျနှိုး မျောတာကို ဆှဲခိုငျးသညျ။ မျောတာမှ ဆိုလိုနှိုကျကစားသော တောကျ ခနဲ မွညျသံထှကျသညျ။ သို့သျောလညျး အငျဂငျြကို မလှညျ့နိုငျဘဲ ရပျနမေညျ။ ဤသို့ဖွဈပါက ဘကျထရီအားနညျး နေ၍ဖွဈမညျ။ (သို့မဟုတျ) ဘကျထရီ ကွိုးနှငျ့ ဘကျထရီခေါငျးမြား ဆကျ သှယျမှု မကောငျးဘဲ မထိတထိဖွဈနေ ခွငျးကွောငျ့ဖွဈမညျ။
စကျနှိုးမျောတာ လညျသျော လညျး ဆှဲအားမကောငျးဘဲ နှေးကှေး နသေညျ။ ကားအငျဂငျြစကျလညျး မနှိုးနိုငျဖွဈနပေါက ကားဘကျထရီ အားအပွညျ့ရှိ / မရှိ ပထမစဈဆေးပါ။ ဘကျထရီ အားကောငျးပါလကျြ မျောတာရုနျးအား မကောငျးခွငျးဖွဈ နပေါက စကျနှိုးမျောတာ (Starter Motor) မကောငျးခွငျးကွောငျ့ ဖွဈနိုငျ သညျ။ ဒိုငျနမို / မျောတာ ဆားဗဈဆိုငျ တှငျ မျောတာကို စဈဆေးပါ။ ဆားဗဈ စငျလုပျပါ။ မကောငျးသော အစိတျ အပိုငျးမြားကို အစားထိုးလဲပါ။
စကျနှိုးမျောတာစနဈ လညျး ကောငျးသညျ၊ ဘကျထရီလညျး အား အပွညျ့ရှိသညျ။ ကားသော့လှညျ့၍ စကျနှိုးကွညျ့ပါက မျောတာအား ကောငျးကောငျးနှငျ့ လှညျ့ပေးနိုငျ သညျ။ သို့သျော ကားအငျဂငျြစကျနှိုး ရနျ အရိပျအယောငျတောငျ မမွငျဖွဈ နတေတျသညျ။ ကားအငျဂငျြတဈလုံး စတငျစကျနှိုးသှားနိုငျရနျ လိုအပျခကျြ မြားက အဘယျနညျး။
(က) အငျဂငျြ လုံရမညျ။
Compression ဖိသိပျအား မွငျ့မားရ မညျ။ အငျဂငျြ ဆလငျဒါ တဈလုံးတှငျ Compression Test စမျးကွညျ့ပါက ဖိသိပျအား 120 psi မှ 170 psi အတှငျးရှိရမညျ။ အကယျ၍ ဖိအား 70-80 psi ထကျ လြော့နညျးနလြှေငျ အငျဂငျြစကျနှိုးရနျ မဖွဈနိုငျတော့ပါ။ အငျဂငျြ Compression ကောငျးပွီး လုံနစေရေနျ ပစ်စတငျ Ring မြား ကောငျးရမညျ။ ဆလငျဒါ Head ဂတျဈ ကတျလုံရမညျ။ ဗားမြား လုံရမညျ။ အငျဂငျြ Ring ကှငျးမြားကြိုးပွီး တိုငျမငျ Belt ကွိုး မကောငျး၍ တိုငျမငျလှဲခြျော နသေော အငျဂငျြတဈလုံးသညျ Compression ဖိသိပျအား မကောငျးနိုငျ ပါ။
(ခ) တိုငျမငျ မှနျကနျရမညျ။
အငျဂငျြ Head အတှငျးမှ ဗားမြား အဖှငျ့အပိတျ တိုငျမငျကို မှနျကနျတိကြ စှာ လှုပျရှားစသေောအရာမှာ Camshaft ဖွဈသညျ။ Camshaft ကို ခြိနျးကွိုး (သို့မဟုတျ) တိုငျမငျ Belt ကွိုးဖွငျ့ လှညျ့ပေးသညျ။ တိုငျမငျ Belt ကွိုးသကျတမျးပွညျ့ပါက အခြိနျ မီ အသဈလဲပေးရသညျ။
(ဂ) လောငျစာဆီနှငျ့ မီးပှား Spark
ဓာတျဆီ အငျဂငျြမြားသညျ မီး တိုငျမငျမှနျကနျမှသာ စကျနှိုးရနျလှယျ ကူသညျ။ မီးပေးတိုငျမငျစနဈ ကောငျး ရနျ Ignition Coil နှငျ့ Spark Plug မြားလညျး ကောငျးရသညျ။ ပလပျကွိုး နှငျ့ ဒဈစတွီဗြူတာမြား ကောငျးရ သညျ။ ဒဈစတွီဗြူတာစနဈကို ကြျော လှနျခဲ့သော ယနခေ့တျေကားအငျဂငျြ မြားတှငျ မီးတိုငျမငျကို ကှနျပြူတာ စနဈက အမိနျ့ပေးညှနျကွားသညျ။
ထိုနညျးအတူ လောငျစာဆီပို့ စနဈတှငျလညျး ကှနျပြူတာထိနျး ကြောငျးမှုရှိသော EFI စနဈဖွငျ့ ဆီဖွနျ့ဝပေေးသညျ။ လောငျစာဆီမြား အရညျအသှေးမှနျကနျပွီး Injector မြား ကောငျးပါက စကျနှိုးရနျအဆငျ သငျ့ဖွဈသော အငျဂငျြတဈလုံးဖွဈပါ သညျ။
ကားအငျဂငျြတဈလုံး စကျနှိုး၍ မရသောအကွောငျးတရားမြားကို ရှာ ဖှဖေျောထုတျရာတှငျ သာမနျမကျြမွငျ စဈဆေးရုံဖွငျ့မသိနိုငျသော ပွဿနာ မြားကို ပစ်စညျးကိရိယာ Device အထောကျအကူမြားဖွငျ့ ရှာဖှမှေသာ မွငျနိုငျပါသညျ။ ကားစကျနှိုးရခကျ သော၊ အနှိုးထိုငျးသော၊ စကျသံမမှနျ သောကားမြားကို ပစ်စညျးကိရိယာစုံ လငျသော စကျပွငျကားဝပျရှော့ပျကွီး မြားတှငျ စဈဆေးပွုပွငျသငျ့ပါသညျ။
ကားခဈြသူ Credit awjmyanmar
ကားရှိသူ ကားမောင်းသူတိုင်းအတွက် တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ လက်ဆောင်…. ရုတ်တရက် စက် နှိုးမရတဲ့ ပြဿနာနှင့် ချွတ်ယွင်းချက်များကို ကိုယ်တိုင် စစ်ကြည့်နည်း Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 5:31 AM Rating:5[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် လူတိုင်းကြုံဖူးသော ရုတ်တရက်ကားအင်ဂျင်စက် နှိုးမရသော ပြဿနာနှင့် ချွတ်ယွင်းအားနည်းချက်များကို ကိုယ်တိုင်အဖြေရှာနည်း ရ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 5:31 AM
တဈကမ်ဘာလုံးကို အငျတာနကျအခမဲ့ လှငျ့ပေးမဲ့ Elon Mask (SpaceX)
အခွခေံအကဆြုံး Hardware Player မွနျမာစာအုပျ
ဖုနျးတှရေဲ့ ကငျမရာ အနားပါ ပါလာတတျတဲ့ အနကျရောငျ အပေါကျလေးက ဘာအတှကျ အသုံးပွုတာလဲ
လကျပျတော့ကနေ Wi-Fi ဘယျလို လှငျ့မလဲ